China YF-H-203-2 ebuli elu multifunction sidetable Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-H-203-2 ebuli elu multifunction sidetable
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụma kọfị nchekwa, nke a Nikka elu-gloss inwego-top table bụ ezigbo. Ihe mara mma, nke oge a ọ bụghị naanị na-azọpụta gị ohere, imewe mgbanwe nwere oge ọ bụla mgbe ọ na-enye ọtụtụ ọrụ.
Atụmatụ Nchekwa, Ihe osise, iko na-eme ka mmiri daa
YLỌ Multifunctional & Oge a
IHE: High gloss MDF osisi + Igwe anaghị agba nchara ụkwụ
Isiokwu oge 400mmL x 400mmW x 500mmH
Anyị multifunctional nightstand na mfe kpochapụwo na fashionable imewe, ezigbo elu nwere ike mfe kpochara. Swivel casters na-enye tebụl akwa a na-adịte aka na-adịgide adịgide ma na-enye ohere ịmegharị tebụl n'ụzọ dị mfe. Enwekwara ike iji ya dị ka abalị, tebụl kọmpụta kọmpụta sofa, tebụl ọmụmụ, ide ihe, ịde ihe na tebụl agụ
Mfe kpochapụwo na ejiji ejiji, enwere ike ihicha elu dị mfe.
Enwere ike dọpụta ndị na-ese ihe 3 n'akụkụ abụọ, gụnyere drawer 1 maka igbe kleenex oge niile yana swịl 360 ogo na laptọọpụ tiltable, nchekwa 2 mepere emepe. Ọ bara ezigbo uru.
Multifunction: Ọ ga-eji dị ka a nightstand, ime kabinet, console table, wdg. Shelflọ elu dị elu na-adọrọ mmasị ma na-arụ ọrụ nke ọma, shelf na-enye ohere maka itinye laptọọpụ, akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, kọfị, mkpụrụ osisi, nri, nri, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ihe mara mma nke Z bụ ezigbo ihe enyemaka na sofas, oche, na akwa dị ka tebụl dị mma maka ihe ị na-enweta ugboro ugboro. Ọzọkwa, okpokoro akụkụ bụ nhọrọ dị ukwuu maka onye bi na obere oghere ma ọ bụ ụlọ obibi, nke ga-enyere gị aka iji ọnụ ụlọ ahụ mee ihe n'ụzọ zuru ezu. Onye na-ejide laptọọpụ a nwere ike igbo mkpa ezinụlọ kwa ụbọchị.
Njirimara: 1.The top table nwere ike ịbụ free inwego & 360 Celsius bugharia na weturu. Ihe nkwụnye ihe na-egbochi ihe ịpịpụ. 2 drawer abụọ na-enye nchekwa zoro ezo.
Ọ dị mfe ịga: Ntugharị ụkwụ, ndị nkedo anọ na abụọ n'ime ha nwere ike ịgbachi, na-enye gị ohere ịkwaga ebe ọ bụla ịchọrọ, ma kpọchiri emechi ka ọ sie ike.
Nkwakọ ngwaahịa na asụsụ 24 (Bekee, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Dutch, Polish, Hungarian, Romania, Danish, Swedish, Finnish, Lithuanian, Norwegian, Slovenian, Greek, Czech, Bulgarian, Croatian, Slovak, Estonian, Russian , Latvian)
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nzụta gị ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla maka ọrịre, ndị nnọchi anya ndị ahịa anyị dị maka inyere gị aka.
Nke gara aga: YF-H-203-1 akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ abụọ sara mbara na-eguzo abalị
Osote: YF-H-204 White Golden imecha Modern Nightstand Side End Isiokwu na Igbe
Isiokwu Akwadoro Isiokwu
Okpokoro àkwà na ụkwụ Brass
Okpokoro edskwà Ikike
Na-ese n'elu mmiri Akwa Isiokwu
Isiokwu Nordic Bedside
Isiokwu Smart Bedside
Nkecha Akụkụ Akụkụ
Velvet Fabric àkwà Isiokwu
YF-H-206 Side Isiokwu na Self-emechi Igbe La ...
YF-H-201 Home Nightstand Akụkụ ọcha
YF-H-202 Luxurious Bedside Tebụl Nchikota
YF-H-210 Oge okomoko White & Gold 3 Bịaruo ...
YF-H-203-1 akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ abụọ sara mbara na-eguzo abalị
YF-H-205 elu gloss 2 Igbe Nightstand